छोराछोरी जिद्दी खालका छन् ? अनुशासित बनाउन यी उपाय अपनाउनुहोस् — Sanchar Kendra
१काँचो र उसिनेको अण्डा खाँदा हुन्छन यस्ता फाइदा, तपाई पनि थाहा पाउनुहोस
२काठमाडौंमै लाइभ आत्म ह’त्या गरिरहेका यी युवालाई प्रहरीले यसरी बचायो
छोराछोरी जिद्दी खालका छन् ? अनुशासित बनाउन यी उपाय अपनाउनुहोस्
त्यसमा पनि जिद्दी बालबालिकालाई सम्हाल्नु र अनुशासित बनाउनु अभिभावकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । नुहाउन, खाना खुवाउनदेखि सुताउनसम्म हरेक कुरामा बालबालिकालाई सम्झाउन वा फकाउन जति गाह्रो अरु केही काम हुँदैन । बालबालिकाको हेरचाहमा आमाबुवाको गल्ती दिनप्रतिदिन बढ्दै जान्छ र बालबालिका नराम्रोसँग नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान्छन् ।
यदी तपाईं चाहनुहुन्छ कि बच्चाले तपाईंले भनेको मानोस् । यसका लाागि स्वयं तपाईले उनीहरुको कुरा बारे ध्यान दिन र सुन्न जरुरी छ । मजवुत इच्छाशक्ति भएका बच्चाको आकांक्षा र जिद्दी पना पनि बढी हुन्छ । त्यसको विरुद्ध तपाई बहसमा वा उनीहरुसँग यसो हुन्न, यस्तो हुन्छ भन्ने वहसमा नउत्रनु होस् । यदी तपाईंले उनीहरुको कुरा सुन्नु भएन भने उनीहरु धेरै जिद्दी हुनेछन् ।